Tag: mirau | Martech Zone
Wedzera Yako 2022 Kushambadzira Kuedza neKubvuma Kutonga
Muvhuro, Ndira 10, 2022 Muvhuro, Ndira 10, 2022 Eric Tejeda
2021 yanga isingafungidzike sa2020, sekuwanda kwezvinhu zvitsva zviri kunetsa vatengesi vezvitoro. Vatengesi vanozoda kuramba vakasimba uye vachipindura kune zvipingamupinyi zvekare uye zvitsva uchiedza kuita zvakawanda nezvishoma. COVID-19 isingachinjiki yakachinja nzira iyo vanhu vanowana uye kutenga - ikozvino wedzera masimba anosanganisa eiyo Omicron mutsauko, kuvhiringika kweketani uye kuchinjika kwevatengi kune iyo yatove yakaoma puzzle. Vatengesi vari kutsvaga kubata pent-up kudiwa vari
Kushambadzira Matambudziko - Uye Mhinduro - dze2021
Chitatu, Ndira 13, 2021 Chitatu, Ndira 13, 2021 Rich Smith
Gore rapfuura kwaive kukwikwidza kune vatengesi, kumanikidza mabhizinesi mune angangoita ese mapivot kana kunyange kutsiva nzira dzese mukutarisana nemamiriro asinganzwisisike. Kune vazhinji, chinonyanya kushandurwa shanduko yaive yekukanganiswa kwenzanga uye pekugara munzvimbo, izvo zvakagadzira spike hombe mukutengesa pamhepo, kunyangwe mumaindasitiri umo ecommerce yakanga isati yambotaurwa. Iko kuchinja kwakakonzera kuwanda kwenzvimbo yedhijitari, iine mamwe masangano anorwira mutengi